Bit By Bit - Ịmepụta mmekọrịta ọnụ - 5.4.1 eBird
eBird na-anakọta data na nnụnụ si na nnụnụ; ndị ọrụ afọ ofufo nwere ike inye ọnụ ọgụgụ na ọ nweghị òtù nyocha nwere ike ijikọ.
Nnụnụ dị n'ebe nile, ndị na-ahụ maka ornithologists ga-achọ ịma ebe nnụnụ ọ bụla nọ n'oge ọ bụla. N'iburu ihe ndekọ dị otú ahụ zuru oke, ndị na-ahụ maka ọdịnala nwere ike ịza ọtụtụ ajụjụ dị mkpa n'ọhịa ha. N'ezie, ichikota data ndị a abụghị ihe gbasara onye nchọpụta ọ bụla. N'otu oge ahụ, ndị ornithologists chọrọ nchọta na nkọwa zuru ezu, "ndị nnụnụ"-ndị mmadụ na-aga nnụnụ na-ekiri ihe ọchị-na-enyocha ụmụ nnụnụ mgbe nile na ide ihe ha na-ahụ. Obodo abụọ a nwere ogologo oge nke imekọ ihe ọnụ, ma ugbu a, ọ bụ afọ ole na ole gbanwere mmekọrịta ndị a. eBird bụ ọrụ nchịkọta data nchịkọta na-achọ arịrịọ site na ndị nnụnụ gburugburu ụwa, ọ nataworị ihe karịrị nde mmadụ 260 nde ihe ngosi manu site na 250,000 ndị na-eso ya (Kelling, Fink, et al. 2015) .
Tupu ewelite eBird, ihe ka ọtụtụ n'ime data ndị nnụnụ na-eme enweghịzi ndị nchọpụta:
"N'ọtụtụ puku kọlọtọ gburugburu ụwa taa, ọtụtụ akwụkwọ ọgụgụ, kaadị ndepụta, ndepụta nchịkọta akụkọ, na ederede. Ndị anyị na ha na-arụ ọrụ na ụlọ na-achọ ịma na ọ bụ nkụda mmụọ nke ịnụ ugboro ugboro gbasara 'akwụkwọ nnụnụ' nke nwanne m nwoke. 'Anyị maara otú ha nwere ike isi baa uru. N'ụzọ dị mwute, anyị makwa na anyị apụghị iji ya. " (Fitzpatrick et al. 2002)
Kama ịnweta data bara uru a na-ejighị ya, eBird na-enyere ndị nnụnụ aka ịkwado ha gaa na nchekwa data dijitalụ. Ebufe data na eBird nwere mpaghara igodo isii: ndị, ebee, mgbe, ụdị umu, ole, na mgbalị. Maka ndị na-abụghị ndị na-agụ akwụkwọ, "mgbalị" na-ezo aka na usoro eji eme mgbe ị na-eme nchọpụta. Ntụle data nchịkọta data malitere ọbụna tupu ebugo data. Ndị na-achọ ịchọta akụkọ gbasara akụkọ dị iche iche - dị ka akụkọ banyere obere ụdị, akụkọ dị oke elu, ma ọ bụ akụkọ ọhụụ-na-egosi na ebe nrụọrụ weebụ na-akpaghị aka na-achọ ozi ndị ọzọ, dị ka foto. Mgbe ị na-anakọta ozi ndị ọzọ, a na-ezigara otu n'ime narị ndị ọkachamara mpaghara mpaghara maka ọkwa maka nyochaa ọzọ. Mgbe nyocha nke onye ọkachamara mpaghara-gụnyere nwere ike ịnweta ozi ọzọ na onye ọ bụla - a na-atụfu akụkọ ndị akọwapụtara dị ka ndị a na-apụghị ịdabere na ya ma ọ bụ banye na nchekwa data eBird (Kelling et al. 2012) . A na-enyefe onye ọ bụla nọ n'ụwa njikọ ntanetịime nke ntanetị na ntanetị, na, ugbu a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100 akwụkwọ ndị a na-enyocha (Bonney et al. 2014) . eBird na-egosi n'ụzọ doro anya na ndị nnụnụ na-enye afọ ofufo na-enwe ike ịnakọta data ndị bara uru maka nnyocha nyocha ọhụụ.
Otu n'ime mma nke eBird bụ na ọ na - ewere "ọrụ" nke na - eme ugbu a-na nke a, birding. Njirimara a na-enyere oru ahụ aka inweta nnukwu ọnụahịa. Otú ọ dị, "ọrụ" ndị nnụnụ na-eme adịghị adaba na data ndị ornithologists chọrọ. Dịka ọmụmaatụ, na eBird, nchịkọta data na-ekpebi site na ebe nnụnụ, ọ bụghị ebe nnụnụ. Nke a pụtara na, dịka ọmụmaatụ, ihe ka ọtụtụ na-ahụkarị na-abịaru nso n'okporo ụzọ (Kelling et al. 2012; Kelling, Fink, et al. 2015) . Na mgbakwunye na nkesa a na-ezighi ezi nke mgbalị na-enweghị ohere, ihe nyocha nke ndị nnụnụ na-eme anaghị adịcha mma. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ ndị na-azụ nnụnụ na-ebugo ozi gbasara umu nke ha na-ele anya na-adọrọ mmasị, karia ozi gbasara ụdị nile ha hụrụ.
Ndi nyocha nke eBird nwere ihe ngwọta abuo abuo nye nsogbu okwu data a - ngwọta nke nwere ike inye aka na ndi ozo ndi ozo akuku ihe omuma. Nke mbụ, ndị na-eme nnyocha eBird na-agbalị mgbe niile iji kwalite àgwà nke data ndị nnụnụ na-enye. Dịka ọmụmaatụ, eBird na-enye ndị na-eso ụzọ ọzụzụ, ọ mekwara ka anya nke onye ọ bụla so na ya, site na ha haziri, na-agba ndị nnụnụ ume ka ha bulite ozi banyere ụdị anụmanụ niile ha hụrụ, ọ bụghị naanị ihe kachasị amasị (Wood et al. 2011; Wiggins 2011) . Nke abụọ, ndị na-eme nchọpụta eBird na-eji ụdị ndekọ ọnụ ọgụgụ eme ihe iji gbanwee maka ọdịda ahụ na ihe dị iche iche dị na ya (Fink et al. 2010; Hurlbert and Liang 2012) . Ọ ka edoghị anya ma ọ bụrụ na ụdị ndekọ ndekọ a na-ewepụ ihe ọ bụla sitere na data ahụ, mana ndị ornithologists nwere obi ike zuru ezu na ogo nke eBird data gbanwere, dịka a kpọtụrụ aha na mbụ, a na-eji data ndị a mee ihe n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 100 akwụkwọ ndị ọkà mmụta sayensị na-enyocha.
Ọtụtụ ndị na-abụghị ndị ornithologists bụ ndị mbụ nwere obi abụọ mgbe ha nụrụ banyere eBird maka oge mbụ. N'uche m, akụkụ nke obi abụọ a sitere na iche echiche banyere eBird n'ụzọ na-ezighi ezi. Ọtụtụ ndị na-ebu ụzọ eche "Ndi eBird data zuru oke?", Na azịza ya bụ "ọ dịghị." Otú ọ dị, nke ahụ abụghị ajụjụ kwesịrị ekwesị. Ajụjụ kwesịrị ekwesị bụ "Maka ụfọdụ ajụjụ nyocha, ndị eBird data dị mma karịa data nchịkọta ornithology dị ugbu a?" Maka ajụjụ ahụ, azịza ya bụ "n'ezie ee," n'akụkụ ụfọdụ n'ihi na ọtụtụ ajụjụ gbasara mmasị-dịka ajụjụ banyere mpụga nke nnukwu oge -Nke a enweghi uzo ozo di iche iche iji kpoo data.
Ọrụ eBird na-egosi na ọ ga-ekwe omume ịgụnye ndị ọrụ afọ ofufo na nchịkọta nke data sayensị dị mkpa. Otú ọ dị, eBird, na ọrụ ndị yiri ya, na-egosi na nsogbu ndị metụtara ntinye na njirimara data bụ nchegbu maka ikesa ọrụ nchịkọta data. Dịka anyị ga-ahụ na ngalaba na-esote, Otú ọ dị, site n'ichepụta nkà na nkà na ụzụ, a pụrụ ibelata nchegbu ndị a na ntọala ụfọdụ.